Musiibo ka dhacya Indonesia maanta oo Jimca ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musiibo ka dhacya Indonesia maanta oo Jimca ah.
Subaxnimadii hore ee Maanta oo Jimaca ah Dhul gariir Xoogelh ayaa ku dhiftey Dalkaas iyada oo Samatabbixiyeyaasha baaraya burburka isbitaal ku yaal Indonesia oo qeyb
ahaan burburay ka dib markii dhul gariir dad badani ku dhinteen uu ku dhuftey jasiiradda Sulawesi, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof.
Dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay 6.2 magnitude subaxnimadii Jimcaha ayaa yimid saacado uun ka dib markii dhul gariir hore uu dhacay, Boqolaal qof ayaa ku dhaawacmay kumanaan kalena way ku barakaceen dhulgariirka.
Arianto, oo ka tirsan wakaalada badbaadada ee magaalada Mamuju, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP inay isku dayayaan inay gaaraan kuwa ku xayiran Burburka hoostiiga Ma uusan cayimin lambar dhab ah.
Maamulka Dalkaasi ayaa tirada guud ee dhimashada magaalada ka dhigay ugu yaraan 26 laakiin waxay ka baqayaan in intaa ka sii badan ay ku aasanyihiin dhismayaasha dumay, sida ay baahineyso wakaaladda Gurmadka deg dega ah.
Xudunta dhul gariirkii maanta ayaa ahaa lix kiiloomitir (3.73 mayl) waqooyi bari magaalada Majene amaba ilaa iyo 10 kiiloomitir. Khasaaraha ugu horreeyay ee Majene ayaa la sheegay in afar qof ay dhinteen boqolaal kalena ay dhaawacmeen.
Dalka Indooniisiya ayaa taariikh u leh dhulgariirro ba, an iyo Sunaamis iyadoo in ka badan 2,000 oo qof ku dhinteen dhul gariirkii ka dhacay Sulawesi 2018.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in lix bukaan ah iyo qoysaskooda ay ku xayiran yihiin markii ay burbureen qaybo ka mid ah isbitaalka Mitra Manakarra ee magaalada Mamuju
Waxaa diyaarshay Cabsiwahaab Aadan Cabdiramaan
Previous articleMaxkamada Ciidanka Qalabka sida oo amartay in la soo xira dadkii xasuuqay reer Guriceel
Next articleMusharaxa Bobi Wine oo shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii Ugandha
Ku dhawaad 57 Muhaajiriin oo geeriyoodeen Dooni shalay ku degtay...
57 Muhaajiriin ayaa laga cabsi qabaa inay ku geeriyoodeen Dooni shalay ku degtay meel ka baxsan Xeebaha dalkaasi. Afhayeenada Hay’adda Muhaajiriinta Caalamiga ee IOM,...
Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqday gudiga Doorashada Aqalka sare
Maxay tahay sababta uu Maraykanka u maalgelinayo milateriga Israa’iil gaar ahaan...